China အမှိုက်ပုံးမီးရှို့ခြင်းမီးဖိုဆန်ခါမီးဖိုဆန်ခါစက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Xingtejia
1. သွန်းလုပ်ငန်းစဉ်: Shell မှိုတိကျစွာသတ္တုများပုံသွန်း
သွန်း၏ 4. ဂျီ etr မေတြီသည်းခံစိတ်: DIN EN ကို ISO 8062 - တန်း GCTG 5
၅။ လျှောက်လွှာ။ မီးရှို့စက်မီးဖို။
အပူခံနိုင်သောသတ္တုများကိုပုံမှန်အားဖြင့်မြင့်မားသောခရိုမီယမ်နှင့်နီကယ်အရေအတွက်ရှိသောသံမဏိများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အပူခံနိုင်ရည်ရှိသောသတ္တုစပ်များပြုလုပ်ထားသည့်သတ္တုများသည်အပူချိန်မြင့်မားသောအချိန်များတွင်အပူချိန်မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်ထိတွေ့နိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ အပူခံနိုင်ရည်ရှိသောသတ္တုများမှအကျိုးရရှိသောလုပ်ငန်းများတွင်စွမ်းအင်၊ အင်ဂျင်၊ မီးဖို / မီးဖိုနှင့်ရေနံဓာတုပစ္စည်းများပါဝင်သည်။
အပူဒဏ်ခံနိုင်သောသံမဏိသတ္တုများကိုစက်မှုမီးဖို၊ အပူဖလှယ်စက်၊ အပူပေးစက်၊ ဆန်ခါနှင့်အခြားအပူခံစက်မှုသုံးပစ္စည်းကိရိယာများတွင်အပူခံပစ္စည်းများကိုပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။
ASTM A297 စံသည်သံ - ခရိုမီယမ်နှင့်အပူ - ခံနိုင်ရည်ရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်သံ - ခရိုမီယမ် - နီကယ်အလွိုင်းသတ္တုစပ်များကိုဖုံးလွှမ်းသည်။
XTJ သည် ASTM A297 စံနှုန်းနှင့်အပြည့်အဝကိုက်ညီသည့်အပူခံနိုင်ရည်ရှိသောသံမဏိသတ္တုများကိုဂုဏ်ယူစွာကမ်းလှမ်းသည်။
• ASTM A297 အဆင့် HF အမျိုးအစား 19Cr-9Ni
• ASTM A297 အဆင့်နာရီ၊ အမျိုးအစား 25Cr-12Ni
• ASTM A297 အဆင့် HI၊ အမျိုးအစား 28Cr-15Ni
• ASTM A297 အဆင့်ဟောင်ကောင်၊ 25Cr-20Ni အမျိုးအစား
• ASTM A297 အဆင့် HE၊ အမျိုးအစား 29Cr-9Ni
• ASTM A297 အဆင့် HU အမျိုးအစား 19Cr-39Ni
• ASTM A297 အဆင့် HW အမျိုးအစား 12Cr-60Ni
• ASTM A297 အဆင့် HX၊ အမျိုးအစား 17Cr-66Ni
• ASTM A297 အဆင့် HC၊ အမျိုးအစား 28Cr
• ASTM A297 အဆင့် HD၊ အမျိုးအစား 28Cr-5Ni
• ASTM A297 အဆင့် HL၊ အမျိုးအစား 29Cr-20Ni
• ASTM A297 အဆင့် HN အမျိုးအစား 20Cr-25Ni
• ASTM A297 အဆင့် HP၊ အမျိုးအစား 26Cr-35Ni
1. Shell မှိုတိကျသောသတ္တုများပုံသွန်းခြင်း
အရည်ကျိုမီးဖိုလိပ်, အလွိုင်းသွန်းသံမဏိလိပ်, Radiant ပြွန်
သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် - Centrifugal casting စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ် - OEM ကျွန်ုပ်တို့သည်သံမဏိကြိတ်စက်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်သံမဏိသတ္တုအမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သံမဏိ၊ ADI၊ CADI, Ni-Resist, Ni-Hard နှင့်သိပ်သည်းသောဂရပ်ဖိုက်၊ မီးခိုးရောင်သံနှင့်အခြားသတ္တုများကိုသွန်းခဲ့သည်။ XTJ သည်သံမဏိကြိတ်စက်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ထုံးစံနှင့်စီးပွားဖြစ်သတ္တုစပ်များကိုပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသေးစားဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်စွမ်းရည်ရှိသည်။
XTJ ၏အရည်အသွေးမြင့်အလွိုင်းသန့်စင်ပြားများကိုဝယ်ပါ Parason Latest Technology Refiner Plates ဖြင့်သင်၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုဆက်လက်လျှော့ချပါ။ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်စေရန်၊ ယူနီဖောင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အရည်အသွေးမြင့်ပျော့ဖတ်ထုတ်လုပ်ရန်ကူညီသည်။ XTJ Finedge Curved Bar သန့်စင်ဆေးရည်များသည်အထူးပြုလုပ်ထားသောသွန်းလောင်းသည့်စက်ရုံဖြစ်ပြီးတစ်လျှောက်လုံးတွင်တူညီသောမာကျောမှုကိုပေးသည်။ သံမဏိပြားများသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာတူညီစွာဝတ်ဆင်ပြီးဘားအရှည်ရှည်ရမည်။ ပျော့ဖတ်စီးဆင်းမှုသည်ဘားများအကြားရှိကွင်းများအတိုင်း လိုက်၍ ပိုကြာရှည်သည်။
ဆန်ခါပြားနှင့်ဘေးနံရံ၊ အစိတ်အပိုင်းများကို pallet c ပေါ်တွင် ၀ တ်ဆင်ပါ။
1. သတ္တုများပုံသွန်းလုပ်ငန်းစဉ်: Shell မှိုတိကျစွာချ။ 2. သံမဏိတန်း: သွန်း၏ 1.4777 1.4823 1.4837 1,4848 3. ရှုထောင်သည်းခံစိတ်: DIN EN က ISO 8062-3 တန်း DCTG8 4. သွန်း၏ဂျီ etr မေတြီသည်းခံစိတ်: DIN EN ကို ISO 8062 - တန်း GCTG55 ။ လျှောက်လွှာ: pallet ကားများနှင့် sinter ကားများပေါ်တွင်အစိတ်အပိုင်းများကိုဝတ်ဆင်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် pallet cars နှင့် sinter cars ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကြီးမားသောသံမဏိစက်ရုံများကို ဦး ဆောင်နေသည်။ ၁၀ နှစ်ကျော်သတ္တုများထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ ရှိ၍ ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သောဤခံနိုင်ရည်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းများသည်အမြဲတမ်း g ...